एजेन्सी, २५ चैत । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मर्नेहरुको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । अमेरिकामै अरु देशहरुमा भन्दा धेरै संख्यामा संक्रमण भएको पनि पुष्टि भएको छ ।
मंगलबार दिउँसोसम्ममा अमेरिकामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै ११ हजार पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या तीन लाख ७० हजार पुग्नै लागेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा भएको यो वृद्धिले मृतकका परिवारजनलाई थप पीडा दिएको छ । उनीहरुले आफ्नो प्रियजनको अन्तिम बिदाइ पनि ठीक ढंगले गर्न पाएका छैनन् ।
अमेरिकाका भाइरस विशेषज्ञहरुले अनुमान लगाएका छन् कि अमेरिकामा नयाँ कोरोना भाइरसका कारण एक लाखदेखि दुई लाख ४० हजारसम्मको संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु हुनेछ ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरस फैलन नदिन मानिसहरुलाई धेरै जनाको जमघटमा रोक लगाइएको छ । यसै कारण अन्तिम संस्कारका क्रममा हुने जमघट, पारिवारिक समूहमा हुने अंकमाल तथा मृतकको सम्झनामा हुने कार्यक्रमहरु पनि भएका छैनन् । उनीहरु अहिलेको अवस्था सामान्य भएपछि मृतकको सम्झनामा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र भेला हुने वाचा गरिरहेका छन् ।
अमेरिकामा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी निकायले कसैको मृत्यु कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण भएको छ भने शवलाई कसैले पनि नछुन भनेको छ । उक्त सरकारी निकायले अन्तिम संस्कारका लागि तैयार हुनुअघि वा पछि चुम्बन लिने वा शवलाई नुहाइदिने वा कपडा लगाइदिने काम नगर्न पनि भनेको छ ।
यसैकारण अमेरिकामा अहिले अन्तिम संस्कारको तौरतरिकामा बदलाव आएको छ । अमेरिकामा रहेका मुस्लिम समुदायका इमाम अदम जमाल भन्छन् – ‘पहिले हामी मृतको शव लिएर चिहानसम्म जान्थ्यौं । शव गाड्नुअघि पालैपालो शवमाथि माटो हाल्थ्यौं । तर अहिले शव गाड्नुअघिका यी रितिरिवाजहरु सबै बन्द गरिएको छ ।’ उनी भन्छन् – ‘अहिले मस्जिदहरु बन्द छन् । भेला हुन पाइँदैन । व्यवहारिक रुपमा पनि छ फिटको दूरी बनाउनुपर्छ ।’
शव गाड्नुअघि शवलाई नुहाइदिने परम्परा पनि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ । अमेरिकाको रोग नियन्त्रणसम्बन्धी निकायले शवलाई नुहाइदिनै पर्ने धार्मिक तथा साँस्कृतिक परम्परा छ भने शवलाई नछोइकन यी कर्म गर्न सुझाएको छ ।
इमाम अदम जमाल भन्छन् – ‘आजकल शवलाई राम्रोसँग नुहाइदिनुको सट्टामा पानी छर्किएर प्रतीकात्मक रुपले नुहाइदिने गरिएको छ ता कि शव गाड्नुअघिको सबै धार्मिक रितिरिवाज पूरा गरिएको मान्न सकियोस् । यदि शवका कारण संक्रमणको खतरा छ भने चाँडै नै गाड्छौं । मृतकको परिवारजनलाई पनि नमाज घरमै पढ्न भन्छौं ।’
अन्य धार्मिक समुदायको स्थिति पनि फरक छैन । अमेरिकामा रहेको फेडेरेसन अफ इन्डियन एसोसिएशन्सका अध्यक्ष अनि बंसल भन्छन् – ‘हिन्दूहरुको अन्तिम संस्कारमा पनि त्यस्तै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ जुन समस्या इसाइ वा मुस्लिमहरुलाई परेको छ ।’
अमेरिकामा अन्तिम संस्कारको पूरा प्रक्रिया पनि एक ठूलो व्यापारजस्तै बनेको छ । पछिल्लो वर्ष यसको कारोबार लगभग १७ अर्ब डलरको थियो ।
अमेरिकामा २१ हजार भन्दा बढी श्मशान गृह या अन्तिम संस्कारगृहहरु छन् । अहिले यी स्थानहरुमा अन्तिम संस्कारका लागि आउनेहरुको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्य अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको केन्द्र बनेको छ । न्यूयोर्कको श्मशानगृहहरुमा अहिले दिनरात लगातार अन्तिम संस्कारका काम भइरहेका छन् ।
अस्पतालहरुले पनि शवलाई सुरक्षित राख्नका लागि रेफ्रिजेरेसन ट्रकको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अमेरिकामा अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया दुई चरणमा पूरा हुन्छ । अन्तिम संस्कारभन्दा पहिले मृतकको स्मरण हुन्छ । मृतकका इष्टमित्र, आफन्तहरु भेला हुन्छन् र मृतकको स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छन् । त्यसपछि दोस्रो चरणमा शव गाडिन्छ वा जलाइन्छ ।
अमेरिकामा एक शवको अन्तिम संस्कारका लागि औसत एक हजार देखि सात हजार अमेरिकी डलर अर्थात सवा लाख रुपियाँदेखि साढे आठ लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ । शवका लागि कस्तो कफिन छानियो, चिहान खन्नमा कति मजदुर लाग्यो र चिहानघरमा कस्तो ठाउँ पाइयो भन्नेमा खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ ।
२०१९ को आँकडाअनुसार अमेरिकामा ५५ प्रतिशत मानिसहरु शव जलाउँछन् । ३९ प्रतिशतले शव गाड्ने गरेका छन् ।
शव गाड्नमा लाग्ने खर्च, वातावरणमा हुने असरको चिन्ता र परम्परागत रितिरिवाज मान्नेहरु कम हुँदा औसत अमेरिकी नागरिकहरु शव गाड्नेमा भन्दा जलाउनेमा प्राथमिकता दिन्छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शव गाड्ने वा जलाउने काम त भइरहेको छ । तर त्यसअघि हुने मृतकको स्मरणको कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित अमेरिकी राज्यमध्येको एक वासिङ्टनको अन्तिम संस्कारसम्बन्धी डाइरेक्टर्स एसोसिएशनका कार्यकारी निर्देशक रोब गफ भन्छन् – ‘चिहानघरका कर्मचारीको अलावा अन्तिम संस्कारमा कोही हुँदैनन् । मृतकका परिवार वा अन्य कोही पनि हुँदैनन् । परिवारजन पछि चिहानमा आउन सक्छन् तर धेरै संख्यामा आउने अनुमति हुँदैन । कुनै अन्तिम सभा हुँदैन । अन्तिम संस्कारको बेला हुने अन्य रितिरिवाजहरु पनि हुँदैनन् ।’
महामारीका कारण अन्तिम संस्कारमा समस्या भएपछि केही अमेरिकीहरु आफ्ना प्रियजनको शव रेफ्रिजेरेसनमा राख्ने विकल्प पनि छानिरहेका छन् । उनीहरुलाई यो आशा छ कि अहिलेको संकट सकिएपछि परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सकिन्छ । यस्तो विकल्प त्यस्ता मृतकका परिवारजनले रोजेका छन् जसको मृत्यु कोरोना भाइरसको कारणले नभई अन्य कारणले भएको छ ।
अन्तिम संस्कार गृहका कर्मचारीको सुरक्षा चुनौति
कोरोना भाइरसको महामारीका बीच अमेरिकामा अन्तिम संस्कारका बेला शव सफा गर्ने, शवलाई नुहाइदिने क्रममा सहभागी हुने कर्मचारीहरुको सुरक्षाको विषय पनि एक प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।
फ्युनरल होम डे स्प्रिङ एण्ड फिचका अध्यक्ष भिक्टर फिच भन्छन् – ‘शव धुने वा नुहाइदिने काम भइरहँदा त्यहाँबाट निस्किएको पानीको वहाव नियन्त्रण गर्छौं किनकि शरीरबाट निस्किएको पानीबाट संक्रमण फैलिने खतरा रहन्छ । यसैकारण अलग अलग तौलिया तथा अलग अलग सामग्रीको प्रयोग हुन्छ । यी सामानहरुको अलग तरिकाले सफाइको जरुरत हुन्छ । त्यसैले हामी यस्ता सामानहरुलाई अलग्गै राख्छौं ।’
कतिपय अवस्थामा अस्पतालले निजी गोपनियताको कारण देखाउँदै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको हो वा अन्य कारणले भन्ने सूचना नदिन पनि सक्छ । यसै कारण अन्तिम संस्कारका क्रममा हरेक शवलाई कोरोना भाइरसबाटै मृत्यु भएको रुपमा नै व्यवहार गर्न बाध्य बनाएको छ ।
अमेरिकामा शवदाहगृह वा अन्तिम संस्कार गृहमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लगायतका सामग्रीहरुको अभाव भइरहेको छ जसरी चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अभाव भइरहेको छ ।
भिक्टर फिच भन्छन् – ‘हामी राज्यका जनप्रतिनिधिहरुका साथ मिलेर काम गरिरहेका छौं ता कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हामीलाई पनि प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध होस् । अहिले नाइट्रो ग्लोब्स, एन९५ मास्क, सुरक्षित गाउन, अनुहार ढाक्ने उपकरण प्राप्त गर्न धेरै मुस्किल छ ।’
अन्तिम संस्कारको प्रक्रियामा मृतकको परिवारलाई अन्तिम संस्कारको क्रममा के गर्न सकिने र के गर्न नसकिने भनेर जानकारी दिने क्षण सबैभन्दा अप्ठेरो हुन्छ । धेरैले त दिशानिर्देशको पालना गर्छन् तर कैयौं पटक त्यस्तो नहुन पनि सक्छ ।
भिक्टर फिच एक त्यस्ता व्यक्तिको मृत्युको क्षण स्मरण गर्छन् जसको वासिङ्टनमा ठूलो विरासत छ । ती व्यक्तिको सम्बन्ध वासिङ्टन विश्वविद्यालय, वासिङ्टनको फुटबल टीम सिएटल हक्ससँग थियो । व्यक्तिगत गोपनियताको कारण देखाउँदै फिचले ती व्यक्तिको नाम बताएनन् । अपेक्षा गरिएको थियो कि ती व्यक्तिलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन हजारौं मानिसहरु भेला हुनेछन् र उनका जिन्दगीको सम्पूर्ण उपलब्धीहरुको स्मरण गरिनेछ । तर त्यस्ता असाधारण मानिसको अन्तिम संस्कार त्यस्तो हुन सकेन ।
यस्तो अवस्थाका बीच पनि मानिसहरुले एक उपाय निकालेका छन् । अब अन्तिम संस्कारको वेबकास्ट या अनलाइन प्रशारण गरिन्छ । साथै पछि भिडियो बनाएर आफन्तहरुलाई शेयर गरिन्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण मर्नेहरुको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गर्दा चिन्ता पनि थपिएको छ । यो साझा प्रकृतिको पीडाको मानिसमा कस्तो असर पर्ला ? मानसिक स्थितिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
पीडादायी स्थितिलाई रब गफ यसरी व्यक्त गर्छन्, ‘जो मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन् तिनलाई क्वारेन्टिनमा राखिन्छ । तर बिरामीका आफन्त वा परिवारजन वरिपरि रहेर हेरविचार गर्न पाउँदैनन् । यदि पछि मृत्यु भयो भने अन्तिम संस्कारका लागि श्मशानगृह पुग्दा पनि उनीहरुलाई भनिन्छ कि यो काम गर्न सकिन्छ यो काम गर्न सकिँदैन ।’
भिक्टर फिचलाई मर्नेहरुको बढ्दो संख्याको असरबारे प्रष्ट महसुस हुन थालेको छ । फिच भन्छन्, ‘हामीलाई यसबाट बाहिर निस्कन निकै समय लाग्नेछ । हामी न त आफ्ना प्रियजन बिमारी हुँदा उसको वरिपरि रहन सक्छौं न त ऊ मरिसकेपछि उसको अन्तिम संस्कारमा । अन्तिम संस्कार पनि हामी ठीकसँग गर्न पाइरहेका छैनौं । यो पीडादायी क्षणबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न र राहत महसुस गर्न निकै समय लाग्नेछ । कोरोना भाइरसको यो महामारी आज नभए पनि भोलि त सकिनेछ । तर यो खराब समयको यादले लामो समयसम्म मानिसलाई पछ्याइरहनेछ ।’
‘२३ अप्रिलदेखि रमजान शुरु हुँदैछ । यो त्यस्तो समय हो जहाँ हरेक रात सैयौं मानिसहरु मस्जिदमा जम्मा हुन्छन् । तर यस्तो अवस्थामा कोही पनि मस्जिदमा आउने छैनन् । सबै आफ्नै घरमा रहनेछन् । हरेकले आफ्नै घरमा नमाज पढ्नुपर्छ,’ इमाम अदम जमाल भन्छन्, ‘सायद धेरैलाई यो थाहा पनि छैन होला कि यो उनीहरु कसरी गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थाको सामना गर्न धेरैलाई मुस्किल हुनेछ । एक समुदायको रुपमा यस्तो हालतमा त्यही हिसाबले आफूलाई ढाल्नुपर्नेछ । हामी अनलाइनमार्फत जस्तोसुकै सहयोग सम्भव हुन्छ त्यो गर्ने कोशिश गर्नेछौं ।’